१९७ मा फोन गरेर कसैको नम्बर माग्दै हुनुहुन्छ ? अब आफै पत्ता लगाउनुस् चाहिएको नम्बर – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/१९७ मा फोन गरेर कसैको नम्बर माग्दै हुनुहुन्छ ? अब आफै पत्ता लगाउनुस् चाहिएको नम्बर
काठमाडौं, ६ पुस । के तपाई नेपाल टेलिकमको १९७ नम्बर डायल गरी कसैको फोन नम्बर माग्दै हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने अब तपाईले नम्बर मागिरहनै पर्दैन । आफूले चाहेको व्यक्ति वा संस्थाको नम्बर सजिलै पाउन सक्नु हुने भएको छ ।
टेलिकमले थाहा नभएका तर सम्पर्क गर्नुपर्ने टेलिफोन नम्बर पत्ता लगाउन १९७ मा फोन गरेर सोध्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कम्पनीको वेबसाइटबाट पनि आवश्यक नम्बर हेर्न सकिने छ ।
नेपाल टेलिकमको वेब पेजमार्फत् यस प्रकारको पीएसटीएन टेलिफोन सोधपुछ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसका लागि कम्पनीको वेबसाइटमा लगअन गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ दिइएको टेलिकम इन्क्वेरीमा आफूलाई चाहिएको व्यक्ति वा संस्थाको नम्बर खोज्न सकिन्छ ।
विगतमा पनि पीएसटीएन टेलिफोन नम्बर खोज्नका लागि कम्पनीको मुख्य वेब पेजमार्फत वेबमा आधारित इन्क्वेरी प्रणाली सञ्चालनमा रहेको थियो । हाल सोही सेवालाई पुनः परिमार्जित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
रुसले विकाश गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप पहिलो चरणमा आफ्ना नागरिकलाई मात्रै लगाउने